जपानीहरु धेरै बाच्नुको रहस्य के हो ? के हामी पनि लामो समय बाच्न सक्छौ त ? थाहापाउनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
कति खेर गर्ने व्यायाम ?
स्वस्थ शरीरका लागि खानपिनसँगै अभ्यास पनि आवश्यक पर्छ । शारीरिक रूपले स्वस्थ मानिस मानसिक रूपले पनि स्वस्थ रहन्छ । त्यसका लागि नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ। सही समयमा गरिएको नियमित व्यायामले शरीरलाई बढी फाइदा पुर्‍याउँछ।
कतिपयले बिहान व्यायाम गर्दा फाइदा बढी हुने बताउँछन् भने केहीका अनुसार साँझ व्यायाम गर्दा बढी फाइदा पुग्छ ।
– रातभर निद्रा पुर्‍याएर बिहान व्यायाम गर्दा अधिक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। यो गर्दा मानिस दिनभरि ऊर्जावान् रहन्छ। त्यसैले बिहानको समय व्यायामका लागि उपयुक्त मात्र होइन, मानिसलाई दिनभरि ऊर्जाशील बनाइराख्न पनि सहयोगी छ। राति व्यायाम गर्न रुचाउनेहरूले पनि बिहानको समयमा गर्नु उत्तम हुनेछ।
–राति ढिला सुत्ने र बिहान ढ्लिा उठ्नेहरूलाई बिहानको व्यायामले सही लाभ नमिल्न पनि सक्छ। यस्ता मानिसले बेलुकाको समयमा व्यायाम गर्नु ठीक हुनेछ । आफ्नो सुविधाअनुसार बेलुकाको समय निकाली अभ्यास गर्नुपर्छ।
–व्यायाम बिहान गर्नुस् अथवा बेलुका, जतिखेर गरे पनि नियमित र अनुशासित भएर गर्नुपर्छ। व्यायामका लागि बनाइएको तालिकालाई अनुशासित भएर पालना गर्नुपर्छ। अनुशासित भएर नियमित व्यायाम गरे शरीरलाई फाइदैफाइदा पुग्छ।
व्यायाम गर्न नजान्दा शरीरलाई हानी :
स्वास्थ्यको दृष्टिले व्यायामका कैयौं फाइदाहरु छन् । तर, अहिले हामी यस्तो जीवनशैलीमा घोटिएका छौं, जसमा नियमित व्यायामको लागि समय मिल्दैन ।
धेरै वर्षसम्म एकै तरिकाको जीवन व्यतित गर्नु विभिन्न किसिमका गम्भिर समस्याहरुको कारण बन्न सक्छ । यसमा शारीरिक स्थितीहरुको साथसाथै मानसिक स्थिती पनि पर्छन् ।
हाम्रो शरीरलाई दैनिक थोरै मात्रामा शारीरिक सकि्रयताको आवश्यकता हुन्छ । नियमित व्यायामले हाम्रो शारीरिक विकास बढाउँछ र हाम्रो समग्र उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि हुन्छ ।
महिलाहरुले प्रयोग गर्ने धेरैजसो गर्भनिरोधक औषधिहरुमा एस्ट्रोजनको स्तर धेरै हुन्छ । त्यसैले त्यसको सेवन गरेपछि महिलाहरु आँफैलाई गर्भवती हुनबाट रोक्न सक्छन् । धेरै व्यायामको कारणले पनि एस्ट्रोजनको स्तर बढ्छ । यसैले यदि कोही महिला गर्भधारण गर्न चाहन्छिन् भने उनीहरुलाई हेभी एक्सरसाइजबाट बँच्नुपर्छ । र, सामान्य दिनचर्याको पालना गर्नुपर्छ ।
Don't Miss it हरियाे धनियाँ खादा ध्यान नपुगे स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्छ
Up Next कथा : आमाको मायाको कुनै सिमा हुँदैन – एक पटक अवश्य पढ्नुहोला ( भिडियोसहित )